Mudnaanta hore waa daryeelka furan -
Waalidnimo iyo lamaane
Isu gacan qaadka qoyska
Kaalmo nolol malmeedka
Goobaha lagu kulmo
Rugta dhalaanka iyo hooyooyinka
Macmiilnimada daryeelka bulshada
Adeega bulshada qoysaska carruurleyda
Macmiilnimada badbaadadda carruurta
Mudnaanta hore waa daryeelka furan
Meeleynta meelgaarka ah
Siyaabaha sugida xaquuqda
Sheeko dhab ah
Kaalmada badbaadadda carruurta ilmuhu intuusan dhalan
Hooyadu ma awoodo keligeed
Caawinaad ilmaha caqabada neerfo maskaxeedka
Iskhilaaf ayaa ka dhextaagan qofka dhallinyarada ah iyo waalidka
Ilmuhu ma laha guri rasmi ah
Ujeedka badbaadadda carruurta waxay tahay ka caawinta waalidka barbaarinta ilmaha iyo daryeelkooda. Sidaa darteed ayaa leysugu dayayaa in had iyo goor reerka la caawiyo ugu horeyntiina sida ugu fudud, taasoo lagu magacaabo ka caawiyayaasha daryeelka furan.
Waxqabadyada taageerada ee daryeelka furan khasab ma aha, mar walbana waxay ku salaysan yihiin wadashaqayn lala yeesho qoyska. Shaqada badbaadada carruurta inteeda badan waxaaba la fuliyaa iyadoo ah waxqabadyada taageerada ee daryeelka furan.
Haddii xaqiijinta kadib la go’aamiyo in, carruurtii iyo qoyskuba u baahan yihiin caawimo, waxaa loo sameeyaa qorsheyn, taasoo la qori doonana meelaha ay caawimad uga baahan yihiin iyo nuuca caawimada la siinayo tahay. Qorshahaasna wa la daabici doonaa waxaana lagu magacaabaa qorsheynta macmiilka.
Qorshaha macaamiisha had iyo goor qorsheynta macmiilka sameynteeda waxaa lala sameeyaa carruurta iyo qoyska. Qorsheyntana waa la cusbooneysiiya haddii loo baahdo ugu yaraan mar sanadkii. Cusbooneysiinta waxaa la eegaa wixii lagu heshiiyey, shaqada la qabteyse ma aheyd mid caawisey.
Howlaha kaalmo ee daryeelka furan
Ilmahai yo qoyska macaamiisha ka ah badbaadadda carruurta wey heli karaan adeegyada horey loo soo sheegey adeega arrimaha bulshada ee reeraha ilmoyleyda ah, laakiin intaa waxaa dheer in loo sameyn karo howlaha kaalmo ee daryeelka furan, kuwaasoo ahaan kara tusaale:
Daryeelo kala duwan iyo adeegyo baxnaanin
Shaqo qoyseedka badbaadadda carruurta oo la xoojiyo
wakhti gaaban oo ilmihii lagu meeleeyo howlaha kaalmo ee adeega furan
Baxnaaninta aasaasiga waa mida lagu baxnaaniyo xarunta waana baxnaanin qoyskoo dhan. Wey ahaan kartaa mid maalin iyo habeenba ama maalinamada. Baxnaaninta wey ahaan kartaa tusaale muqaadaraadka ama xarun baxnaanin kale oo taqasus ah ama baxnaanin qoys. Ujeedada baxnaanintuna waa badbaadinta barbaarinta ilmaha, kaalmeynta waalidka qaabkey u barbaarin lahaayeen, iyo dhiirigelinta sidey karti dheeriya ugu yeelan lahaayeen.
Ku meeleynta ku meelgaarka gaaban waa xal wadajir ah
Markay xaalad adag jirto waxaa la samayn karaa, in ilmaha ama qoyska oo dhan gurigooda laga kaxeeyo oo wakhti gaaban lagu meeleeyo meel kale, taas oo ah waxqabad taageero oo daryeelka furan ah. Ku meeleynta daryeelka furan mana aha qasab.
ilmaha wakhti gaaban baa la meelayn karaa, Haddey xaaladdu si dhakhso ah u hagaagayso. Tusaale ahaan, hadday waalidka iyo qofka dhallinyarada ah isku xumaadaan oo xaalkoodu gaaro heer aanay suuragal ahayn inay meel ku wada noolaadaan, markaas qofka dhallinyarada ah waxaa loo soo jeedin karaa, inuu wakhti xoogaa ah ku noolaado meel kale oo aan guriga waalidkiis ahayn. Waalidku iyagaa weli go’aan ka gaaraya ilmaha daryeelkiisa iyo arrimihiisa oo dhan. Dhibaatooyin xagga mukhaadaraadka ama dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda ah dartood waxaa dhici karta in waalidku xitaa leeyahay wakhti muddo ah oo baxnaanin ah, markaas oo kale waxaa dhici karta inuu qoyska oo dhan si ku meelgaar ah ugu guuro meesha waalidka lxiliga baxnaaninta. Haddii loo baahdana wakhtigaas ku meeleynta ku meelgaarka ee waxqabadyada taageerada ee daryeelka furan deg-deg ayaa loo sameyn karaai.
Aqri midka xiga
Eraybixintani waxay macnaynaysaa erayadaas kuwooda ugu muhiimsan ee la xiriira badbaadadda carruurta.